🥇 ▷ Qiimaha AppleCare + ayaa kordhay iPhone 6s ✅
Qiimaha AppleCare + ayaa kordhay iPhone 6s
AppleCare Plus + waxay ku kici doontaa qiimo ka badan iPhone cusub
AppleCare + dammaanad qaaska ah ee loogu talagalay iPhone 6s cusub iyo iPhone 6s Plus waxay ku kici doontaa $ 30 dheeraad ah iyo suurtogalnimada sicirka suuqa Yurub wuxuu sidoo kale 30 euro ka sarreeyaa, marka loo eego nooca iPhone 6. Soo jeedinta Apple ee ah inay siiso difaac dheeri ah aaladahaaga hadda waxay ku kici doontaa qiyaastii 130 euro 2 sano.
Isticmaalayaasha raba inay ka iibsadaan AppleCare + aaladaha duugga ah, qiimuhu wuxuu ahaan doonaa 99 euro. Dhanka kale, adeega wuxuu gaarayaa ilaa labo shil oo shil ah oo ku dhacay iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus sidoo kale waxay gaarayaan ilaa 99 yuro halka qiimaha uu kusii nagaan doono 79 euro oo ah noocyadii hore ee iPhone.
Kordhinta isugeynta cusub
Soo bandhigida iPhone 6s cusub iyo iPhone 6s Plus ma ahan oo keliya war wanaagsan. Shirkadda Cupertino ayaa go’aansatay inay kordhiso qiimaha ilaalinta ee aaladoheeda cusub isla markaana hadda qiimaha lagu kordhiyo dammaanadda iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus oo 2 sano ah ay ku kici doonto 129 euro. Waa koror 30 euro ah in kastoo qaar ka mid ah ay ku doodi doonaan inay tahay koror yar, runtu waxay tahay in qiimaha ugu dambeeya uu noo horseedi karo inaan tixgelinno laba jeer ka hor intaadan iibsan ilaalinta.
Waxa ugu wanaagsan ayaa ah in tan iyo Apple ay go’aansadeen inay sii hayaan qiimaha aaladaha hore, hab lagu sii wado dhiirigelinta iibsashada barnaamijka AppleCare + si kor loogu qaado ilaalinta iPhonekaaga haddii shil dhaco ama jabto.
dheeraad ah Apple Continue barnaamijka cusboonaysiinta ee kuu oggolaanaya inaad iibsato aaladaha cusub ee qaybo, oo ay ku jiraan ilaalinta AppleCare +, oo leh qorshayaal 32 euro bishii. Dalka Mareykanka, hawl wadeenada sida T-Mobile waxay sidoo kale soo bandhigaan qorshooyin iibsasho oo leh ajuuro iyo ku darida dammaanadda AppleCare +.
Miyey mudan tahay AppleCare +?
Mid ka mid ah shakiga weyn ee iibsadayaasha marka ay iibsanayaan iPhone waa adeegga dhabta ah ee adeegga dammaanadda ee AppleCare +. In kasta oo kharashaadka dheeriga ahi ay waxyeeleeyaan dhaqaalaheena, runtu waxay tahay ilaalinta oo dammaanad qaaday Apple Waa mid gaar ah. Waxaa ka mid ah dayactirka iyo qalabka dayactirka aaladaha haddii ay wax dhacaan shilalka, waxayna noqon kartaa waddo aad ufiican inaadan lumin lacagtaada haddii, nasiib xumo, taleefanka gacantu uu ku dhaco nooc burburay wax yar ka dib markii la iibsado.
Sida had iyo jeer ah kiiska dammaanadaha, waligaa ma ogaan kartid inaad adeegsato iyo in kale, laakiin haddii aad haysato lacag aad ku iibsato qorshaha AppleCare + ee loogu talagalay iPhone 6s-kaaga iyo iPhone 6s Plus, waxay amniga ka hortageysaa dhacdooyin kala duwan.